बाबुराम भट्टराईको दौरा सुरुवाल पहिरन, परिवर्तन वा ‘मिडिया स्टन्ट’ ? « NBC KHABAR
काठमाडौं । दश बर्षे सशस्त्र युद्दको सफलताको सन्देश दिन गरिएको आमुल परिवर्तनको शिकार दौरा सुरुवाललाई पनि बनाइयो । राष्ट्रिय पोशाकको रुपमा शोभायमान दौरा सुरुवाललाई २०६८ सालमा खारेज गरियो । प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दौरा सुरुवाल र साडी चोलोलाई राष्ट्रिय पोशाकबाट हटाएका बाबुराम भट्टराइले सात वर्षपछि दौरा सुरुवालमा सजिएको तस्बीर सामाजिक सञ्जालमा सजाएका छन् ।
मुलुकको चिनारीको रुपमा भन्दा पनि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको आवरण मानियो दौरा सुरुवाललाई । तत्कालीन माओवादी नेताहरुले सिंहदरबारको शयर गर्दा पनि दौरा सुरुवाललाई कहिं कतै महत्व दिएनन र यो क्रम अझ पनि जारी छ । तर पछिल्लो समय परिस्थिति फेरिएको छ ।
सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरासँगै बाबुराम भट्टराईले पनि बिहीबार दौरा सुरुवालमा ठटिएर आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको पात्र बनाएका छन् । भट्टराईले ट्विटरमा ट्वीट गर्दै देश अनुसारको भेष भन्दै खस बाहुल्य कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने क्रममा दौरा सुरुवाल लगाएको तस्वीर सार्वजनिक गरे । राष्ट्रिय पोशाकको विरोधीको रुपमा नाम कमाएका भट्टराईलाई धेरैले सुखद प्रतिक्रिया दिंदा केहीले मिडिया स्टन्ट समेत भनेका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले समेत भट्टराईको दौरा सुरुवाल लगाएको तस्वीर ट्वीट गर्दै ‘वाह्’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । देशका अन्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले दौरा सुरुवाल लगाइरहँदा भट्टराईले कहिले पनि दौरा सुरुवाल लगाएनन् । तर, देश दौडाहाका क्रममा कर्णाली प्रदेश पुगेका बाबुरामले जीवनमै पहिलोपटक दौरा–सुरुवाल लगाउँदा सामाजिक सञ्जलामा भाइरल बनेको तस्वीरलाई भने धेरैले मिडिया स्टन्टको संज्ञा दिएका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराईले महंगा गाडीलाई बाइपास गर्दै नेपालमै बनेको मुस्ताङ गाडी चढ्दा उनको देशप्रेमको चर्चा चुलिएको थियो । सत्तामा रहदा नै जनकपुरमा आयोजित राजनीतिक सभामा धोती कुर्ता र गाम्चा लगाएर उभिएका भट्टराईको नयाँ रुप अल्पकालीन हो या उनले पछिल्लो आरोपलाई मित्था सावित गर्न लगाएका हुन् ? प्रश्न उब्जिएको छ ।